နိုးလော့! | ဇူလိုင် ၂၀၀၈
အိမ်ထောင်ရေးကို လမ်းတစ်လျှောက် အံ့ဩစရာများစွာရှိပြီး ပျော်ရွှင်စရာများလည်းရှိ၊ ပင်ပန်းစရာများလည်းရှိသော ခရီးစဉ်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သည့် အခြေအနေများက မျှော်လင့်မထားသော ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ပြဿနာတချို့မှာ ဖြေရှင်းနည်းရှိပုံမပေါ်ချေ။ သို့သော် များစွာသောသူတို့သည် ပြဿနာအနည်းအကျဉ်းဖြင့် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးဆက်ကြလေသည်။ အမှန်မှာ သာယာသောအိမ်ထောင်များသည် ပြဿနာအနည်းဆုံးရှိသော အိမ်ထောင်များမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာများကို ကောင်းစွာဖြေရှင်းကြသော ဇနီးမောင်နှံတို့၏ အိမ်ထောင်များဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ဟူသောခရီးကို ပို၍အောင်မြင်စွာနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရန် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု သင်ထင်သနည်း။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် မိမိတို့အား လမ်းညွှန်ပေးသည့် ‘အိမ်ထောင်ရေးလမ်းညွှန်မြေပုံ’ တစ်ခုလိုအပ်သည်ဟု မောင်နှံများစွာက ယူဆကြသည်။ အိမ်ထောင်အစပြုရှင်ဖြစ်သော ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် အိမ်ထောင်အတွက် အားအထားရဆုံးနှင့် စိတ်အချရဆုံး “မြေပုံ” ကို ပြင်ဆင်ပေးထားတော်မူ၏။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ထွက်စကားတော်ဖြစ်သော သမ္မာကျမ်းစာသည် အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုမဟုတ်ချေ။ ယင်းအစား သာယာသောအိမ်ထောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံများ လိုက်နာဖို့လိုအပ်သည့် လက်တွေ့ကျလမ်းညွှန်ချက်များကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။—ဆာလံ ၁၁၉:၁၀၅; ဧဖက် ၅:၂၁-၃၃; ၂ တိမောသေ ၃:၁၆။
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ခရီးတစ်လျှောက် သင့်အား လမ်းပြပေးနိုင်သည့် လမ်းညွှန်မှတ်တိုင်များဖြစ်သော အဓိကကျသည့် ကျမ်းစာမူများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ကြပါစို့။
အိမ်ထောင်ရေးကို မြင့်မြတ်ရာအဖြစ် ရှုမြင်ပါ။ “ဘုရားသခင်တွဲဖက်ထားသူတို့ကို မည်သူမျှ မခွဲမခွာစေနှင့်။” (မဿဲ ၁၉:၆၊ ကဘ) ဖန်ဆင်းရှင်သည် ကနဦးလူသား အာဒံကို ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ ဧဝနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့စဉ်တွင် အိမ်ထောင်အစီအစဉ်ကို အစပြုပေးတော်မူခဲ့၏။ (ကမ္ဘာဦး ၂:၂၁-၂၄) မိမိ၏လူသားဘဝမတိုင်မီက အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခဲ့သူ ခရစ်တော်ယေရှုသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ အိမ်ထောင်ရေးနှောင်ဖွဲ့မှုကို တည်မြဲသောဆက်ဆံရေး၏အစဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် ဤသို့မိန့်ဆိုခဲ့၏– “အစအဦး၌ ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သည် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကို ဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်း သင်တို့ မဖတ်ဖူးသလော။ ‘ထိုအကြောင်းကြောင့် ယောက်ျားသည် မိဘကိုစွန့်၍ မယားနှင့်စုံဖက်သဖြင့် ထိုနှစ်ဦးသည် တစ်သားတစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်’ ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလည်း မဖတ်ဖူးသလော။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် နှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘဲ တစ်သားတစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်တွဲဖက်ထားသူတို့ကို မည်သူမျှ မခွဲမခွာစေနှင့်။”—မဿဲ ၁၉:၄-၆၊ ကဘ။
“ဘုရားသခင်တွဲဖက်ထား” သည်ဟုဆိုရာတွင် အိမ်ထောင်ကို ကောင်းကင်၌ စီစဉ်ပေးခဲ့သည်ဟု ယေရှုဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပေ။ ယင်းအစား အိမ်ထောင်ကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ယင်းကို မြင့်မြတ်ရာအဖြစ် ရှုမြင်ရမည်ဟု ယေရှုအတည်ပြုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ *
လင်ယောက်ျားများနှင့် ဇနီးသည်များသည် အေးတိအေးစက်နိုင်၍ မေတ္တာကင်းမဲ့သောအခြေအနေတွင် အတူပေါင်းဖက်လိုကြမည်မဟုတ်ချေ။ ယင်းအစား သူတို့သည် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်လိုကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် တွေ့ရသော ဖန်ဆင်းရှင်၏ လက်တွေ့ကျအကြံဉာဏ်ကို သူတို့လိုက်နာကြမည်ဆိုလျှင် ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မစုံလင်ကြသောကြောင့် နားလည်လွဲမှုများနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါသည်။ သို့သော် သာယာသောအိမ်ထောင်သည် သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်မှု အပေါ်တွင် မူတည်သည်ထက် သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုကို မောင်နှံများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံအပေါ်တွင် ပို၍မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်တွင် အရေးပါဆုံးစွမ်းရည်များအနက် တစ်ခုမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို မေတ္တာဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ မေတ္တာသည် အရာရာကို အကြွင်းမဲ့ စည်းလုံးသင့်မြတ်စေသောကြောင့်ဖြစ်၏။—ကောလောသဲ ၃:၁၄။
▶ လေးစားစွာ ပြောဆိုပါ။ “သန်လျက်နှင့်ထိုးသကဲ့သို့ မစဉ်းစားဘဲ ပြောဆိုတတ်သောသူအချို့ရှိ၏။ ပညာရှိတို့၏လျှာမူကား အနာကိုငြိမ်းစေတတ်၏။” (သု. ၁၂:၁၈၊ သမ္မာ) အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုမှုအများစုသည် ယင်းကိုစတင်ပုံအတိုင်း အဆုံးသတ်ကြောင်း သုတေသီ များ တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ စကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုကို လေးလေးစားစားဖြင့် အစပြုပါက ထိုနည်းအတိုင်း အဆုံးသတ်ဖို့အကြောင်း ပိုများသည်။ ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်ဦးက မိမိအား မဆင်မခြင် ပြောဆိုလိုက်မည်ဆိုလျှင် မည်မျှထိခိုက်နာကျင်စေနိုင်ကြောင်း သင် သိရှိထား၏။ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ၊ လေးလေးစားစားနှင့် ချစ်ခင်တွယ်တာစွာ ပြောဆိုတတ်ရန် ဆုတောင်းပါ။ (ဧဖက် ၄:၃၁) “ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို တစ်ယောက်က တွေ့မြင်ပေမဲ့ တလေးတစားပြောဆိုကြပြီး တစ်ယောက်စီရဲ့ အရည်အချင်းကောင်းတွေကို တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ကို ကျွန်မတို့ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်” ဟုအိမ်ထောင်သက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဟာရူကို * အမည်ရှိ ဂျပန်လူမျိုး ဇနီးသည်တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
▶ သနားကြင်နာမှုနှင့် ထောက်ထားစာနာမှုကို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။ “အချင်းချင်း ကရုဏာထား၍ သနားကြင်နာကြလော့။” (ဧဖက် ၄:၃၂၊ ကဘ) အိမ်ထောင်တွင် အကြီးအကျယ် သဘောထားကွဲလွဲသည့်အခါ အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးက ဒေါသထွက်လျှင် အခြားအိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်း ဒေါသထွက်စေနိုင်ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်သက်တမ်း ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် အနီးထာက ဤသို့ဝန်ခံ၏– “စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိဖို့ မလွယ်ကူဘူး။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို စိတ်ပျက်စေတဲ့စကားတွေ ပြောမိတတ်တယ်၊ အဲဒါက ကိစ္စရပ်တွေကို ပိုဆိုးသွားစေတယ်။” သို့သော် ကြင်နာမှုရှိပြီး ထောက်ထားစာနာတတ်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အေးချမ်းသာယာသောအိမ်ထောင် တည်ဆောက်ရန် များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
▶ စိတ်နှိမ့်ချပါ။ “ဂုဏ်ပြိုင်လိုသောစိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ [တစ်ကိုယ်ကောင်း] စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း မည်သည့်အမှုကိုမျှ မပြုကြနှင့်။ သူတစ်ပါးသည် မိမိထက် သာလွန်သည်ဟု နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့် ယူမှတ်ကြလော့။” (ဖိလိပ္ပိ ၂:၃၊ ကဘ) အိမ်ထောင်ဖက်များသည် ပေါ်ပေါက်လာသော ပြဿနာများကို နည်းလမ်းများရှာကြံ၍ နှိမ့်ချစွာ ဖြေရှင်းကြမည့်အစား မိမိတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် အပြစ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြသဖြင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ စိတ်နှိမ့်ချခြင်းက သဘောကွဲလွဲမှုတွင် မိမိသာ မှန်သည်ဟု ဇွတ်မပြောဆိုရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
▶ အလျင်စလို အမျက်မထွက်ပါနှင့်။ “အမျက်ထွက်ရန် စိတ်မမြန်စေနှင့်။” (ဒေ. ၇:၉၊ သမ္မာ) မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ရှုမြင်ချက်ကို ကန့်ကွက်လိုသောသဘော၊ မိမိပြောဆိုခဲ့ရာ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာကို မိမိအိမ်ထောင်ဖက်က မေးမြန်းလာလျှင် အလျင်အမြန်ချေပလိုသောသဘောကို ကြိုးစားရှောင်ကြဉ်ပါ။ ယင်းအစား၊ အိမ်ထောင်ဖက်ပြောဆိုရာကို အသိအမှတ်ပြု၍ နားထောင်ပေးပါလေ။ ပြန်မပြောမီ အသေအချာစဉ်းစားပါ။ မောင်နှံများစွာသည် မိမိတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းက အချေအတင်ပြောဆိုမှုတွင် အနိုင်ရရှိခြင်းထက် ပို၍အရေးကြီးသည်ကို အချိန်နှောင်းမှ သိရှိကြရသည်။
▶ တိတ်ဆိတ်စွာနေရသောအချိန်ကို သိပါ။ “နားကြားခြင်းငှာ လျင်မြန်ကြစေ။ စကားပြောခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်းငှာလည်းကောင်း နှေးကြစေ။” (ယာကုပ် ၁:၁၉) အိမ်ထောင်သာယာပျော်ရွှင်ရေးအတွက် အရေးပါဆုံး အထောက်အကူတစ်ခုမှာ ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာက “တိတ်ဆိတ်စွာနေရသောအချိန်” ရှိ၏ဟု အဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်း။ (ဒေ. ၃:၇) ယင်းသည် မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ပြောဆိုရာကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နားထောင်ပေးရသည့်အချိန်ဖြစ်၏၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက် အမှန်တကယ် အဘယ်သို့ခံစားနေရသည်၊ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ခံစားရသည်ကို သိအောင်လုပ်ခြင်းပါဝင်သည့် ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်း၏ အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။
▶ စာနာစိတ်ဖြင့် နားထောင်ပေးပါ။ “ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ ငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူ ငိုကြွေးကြလော့။” (ရောမ ၁၂:၁၅၊ ကဘ) ထိရောက်စွာ ပြောဆိုဆက်သွယ်ရာတွင် စာနာစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ယင်းက သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး စိတ်ခံစားချက်များကို ခံစားစေနိုင်သည်။ တစ်ဖက်သား၏ ယူဆချက်များနှင့် ခံစားချက်များကို တလေးတစားနှင့် သိက္ခာရှိရှိ ပြုမူတုံ့ပြန်စေသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ယင်းက ဖန်တီးပေးနိုင်၏။ “ပြဿနာတွေအကြောင်း ကျွန်မတို့ပြောဆိုကြတဲ့အခါ ကျွန်မ အမြဲ ဂရုတစိုက် နားထောင်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့် မန်ဝဲလ်ရဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကျွန်မ နားလည်ပေးနိုင်တယ်” ဟု ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အိမ်ထောင်သက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော နယ်လ်လာက ဖွင့်ပြောသည်။ သင့်အိမ်ထောင်ဖက် စကားပြောဆိုနေချိန်သည် သင့်ဘက်မှ “တိတ်ဆိတ်စွာနေရသောအချိန်” နှင့် စာနာမှုဖြင့် နားထောင်ပေးရသောအချိန်ဖြစ်၏။
▶ တန်ဖိုးထားကြောင်း ဖော်ပြခြင်းကို အကျင့်ဖြစ်စေပါ။ “ကျေးဇူးသိတတ်ကြလော့။” (ကောလောသဲ ၃:၁၅၊ ကဘ) ခိုင်မြဲသောအိမ်ထောင်အတွင်းရှိ ဇနီးမောင်နှံများသည် တစ်ဦးလုပ်ဆောင်သောအရာကို အခြားတစ်ဦးက မည်မျှတန်ဖိုးထားကြောင်း အပြန်အလှန်သိရှိစေကြသည်။ သို့သော် အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အိမ်ထောင်ဖက်တချို့သည် ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေး၏ ဤအရေးကြီးသောကဏ္ဍကို လျစ်လျူရှုကာ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်သည် တန်ဖိုးထားခံရသည်ဟု ခံစားရကြောင်း တစ်ဖက်သတ်ယူမှတ်ကြသည်။ “မောင်နှံအများစုဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို တန်ဖိုးထားခံရတယ်လို့ အသိပေးနိုင်ပေမဲ့ အဲလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားလေ့မရှိဘူး” ဟုဒေါက်တာ အယ်လန်ဝေါ့ခ်တဲလ်ကဆိုသည်။
အထူးသဖြင့် ဇနီးသည်များသည် မိမိတို့လင်ယောက်ျား၏ မေတ္တာပါအားပေးမှုနှင့် တန်ဖိုးထားကြောင်းဖော်ပြမှုကို လိုအပ်ကြသည်။ လင်ယောက်ျားများသည် မိမိဇနီး၏ အပြုသဘောပါသောလုပ်ရပ်များနှင့် အရည်အချင်းများကို လေးမြတ်စွာ ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်ဇနီးကို ကောင်းကျိုးခံစားရစေသည့်အပြင် မိမိတို့အိမ်ထောင်ရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါသည်။
နှုတ်နှင့်ရော စိတ်နှင့်ပါ အားပေးစကားပြောဆိုခြင်းက မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လင်ယောက်ျားများသည် မိမိ၏ဇနီးသည်အား ကြင်နာသောအနမ်း၊ နူးညံ့သောအထိအတွေ့၊ လှိုက်လှဲသောအပြုံးစသည့် အပြုအမူများကို လုပ်ဆောင်သောအခါ “မင်းကို ကိုယ်ချစ်တယ်” ဟုပြောဆိုရုံထက် ပိုတာသွားသည်။ ယင်းက သူသည် သင့်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကို သင် လိုအပ်ကြောင်း စိတ်ချစေသည်။ ဇနီးထံ ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ပို့၍ဖြစ်စေ “မင်းကို ကိုယ်လွမ်းတယ်” သို့မဟုတ် “နေကောင်းရဲ့လား” ဟူ၍ပြောပြပါလေ။ ပိုးပန်းချိန်လွန်ပြီးကတည်းက သင့်ဇနီးကို ထိုသို့မပြောဆိုခဲ့လျှင် ယခုတစ်ဖန် စတင်ပြောဆိုခြင်းသည် အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏နှလုံးကို ထိမိစေသောအရာအား ဆက်လက်သင်ယူပါလေ။
ရှေးအစ္စရေးဘုရင် လေမွေလ၏မယ်တော် ပြောဆိုခဲ့သည့် ဤစကားများက အလွန်လျောက်ပတ်ပါသည်– “ခင်ပွန်းကလည်း ‘အမျိုးသမီးအများတို့သည် ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ။ သို့ရာတွင် သင်သည် ထိုသူအပေါင်းတို့ထက် လွန်ကဲပြီ’ ဟုချီးမွမ်း၏။” (သု. ၃၁:၁၊ ၂၈၊ ၂၉၊ သမ္မာ) သင့်ဇနီးအား သင် ချီးမွမ်းခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ အဘယ်အချိန်နည်း။ သို့မဟုတ် သင်သည် ဇနီးဖြစ်လျှင် သင့်ခင်ပွန်းသည်အား ချီးမွမ်းခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအချိန်ကား အဘယ်အချိန်နည်း။
▶ အမြန်ဆုံးခွင့်လွှတ်ပါ။ “အမျက်မပြေဘဲ နေမဝင်စေနှင့်။” (ဧဖက် ၄:၂၆၊ ကဘ) သင်နှင့် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှစ်ဦးစလုံးသည် အမှားများပြုမိကြမည်။ သို့ဖြစ်၍ ခွင့်လွှတ်လိုစိတ်ရှိရန် အရေးကြီးသည်။ လွန်ခဲ့ သော ၄၃ နှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ကြသည့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ ကလိဗ်နှင့် မော်နီကာတို့က ဤကျမ်းစာဆုံးမစကားသည် အလွန်အထောက်အကူပြုကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြ၏။ “ဧဖက် ၄:၂၆ မှာတွေ့ရတဲ့မူကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားကျင့်သုံးကြတယ်၊ အဲဒါက ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကို ရွှင်လန်းစေတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အမြန်ဆုံးခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ အခြေအနေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ အားရကျေနပ်သွားပြီး သိစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတယ်” ဟုကလိဗ်က ရှင်းပြ၏။
ရှေးနယပုံပြင် ပညာရှိစကားတစ်ခွန်းမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်– “လွန်ကျူးမှုကို သည်းခံသောအားဖြင့် ဘုန်းအသရေထင်ရှား၏။” (သု. ၁၉:၁၁၊ သမ္မာ) အစပိုင်း၌ဖော်ပြခဲ့သည့် အနီးထာက “ခွင့်လွှတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ အိမ်ထောင်သာယာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟုထောက်ခံပြောဆိုသည်။ အကြောင်းရင်းကို သူဤသို့ရှင်းပြသည်– “အဲလိုမှမဟုတ်ရင် နာကြည်းမှုတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ တိုးများလာပြီး အဲဒါက အိမ်ထောင်ရေးကို တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းစေတယ်။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်နှောင်ကြိုးခိုင်မြဲလာပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပိုပြီးရင်းနှီးလာတယ်။”
သင်သည် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်အား စိတ်ထိခိုက်စေခဲ့သည်ဆိုလျှင် သင့်အား သူခွင့်လွှတ်ပြီး ယင်းကိုမေ့ပစ်လိုက်မည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းတွင် အိမ်ထောင်ဖက်များ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပို၍ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များအနက်တစ်ခုကို သင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းမှာ သင်အမှားလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် “ကိုယ်မှားသွားတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်” ကဲ့သို့သော အပြောမျိုးကို နှိမ့်ချစွာပြောဆိုရန် နည်းလမ်းရှာပါ။ နှိမ့်ချစွာတောင်းပန်ခြင်းက ရိုသေလေးစားမှု ပြန်လည်ရရှိစေကာ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်စေနိုင်ပြီး သင့်အား စိတ်ငြိမ်သက်မှု ပိုမိုခံစားရစေပါလိမ့်မည်။
▶ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အိမ်ထောင်အပေါ် သစ္စာရှိပါ။ “သူတို့ [လင်ယောက်ျားနှင့်ဇနီး] သည် နှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘဲ တစ်သားတစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်တွဲဖက်ထားသူတို့ကို မည်သူမျှ မခွဲမခွာစေနှင့်။” (မဿဲ ၁၉:၆၊ ကဘ) သင်တို့ကြားတွင် ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော်လည်း ဆက်၍ပေါင်းသင်းသွားကြမည်ဟု ဘုရားသခင်နှင့် အခြားအသိသက်သေများရှေ့တွင် အပြန်အလှန် သစ္စာကတိပြုထားကြသည်။ * သို့သော် သစ္စာကတိပြုခြင်းသည် ဥပဒေဆိုင်ရာဝတ္တရားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ချေ။ ယင်းအစား ရိုးသား၍ စစ်မှန်သောမေတ္တာကြောင့် ထိုသို့ပြုရန် လှုံ့ဆော်ခံရပြီး ယင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် ရိုသေလေးစားမှုနှင့် ဂုဏ်တင်မှုတို့ကို ဖော်ပြပေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့၏မြင့်မြတ်သောအိမ်ထောင်ကို ပရောပရည်လုပ်ခြင်းဖြင့် မပြိုကွဲစေဘဲ မိမိ၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်တွင်သာ ချစ်ခင်တွယ်တာသင့်ပါသည်။—မဿဲ ၅:၂၈။
▶ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်းဖြင့် အိမ်ထောင်ကတိသစ္စာကို ခိုင်မြဲစေပါ။ “သင်တို့သည် ကိုယ့်အရေးကိစ္စကိုသာ အာရုံမစိုက်ဘဲ သူတစ်ပါး၏အရေးကိစ္စကိုလည်း အာရုံစိုက်ကြလော့။” (ဖိလိပ္ပိ ၂:၄၊ ကဘ) အိမ်ထောင်ကတိသစ္စာကို ခိုင်မြဲစေသည့် နည်းလမ်းများအနက် နည်းတစ်နည်းမှာ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ လိုအပ်ရာများနှင့် အကြိုက်များကို ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း အနှစ် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်သော ပရမ်ဂျီသည် အိမ်အလုပ်ကို အချိန်ပြည့်လုပ်ဆောင်နေသည့် ဇနီးသည်အား မပျက်မကွက်ကူညီပေး၏။ “ချက်ပြုတ်ရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ တခြားလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ ရီတာကို ကျွန်တော် ဝိုင်းကူလုပ်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့် သူနှစ်သက်ရာတွေလုပ်ဖို့ သူ့မှာအချိန်နဲ့ ခွန်အားရသွားတယ်။”
တစ်ခါတစ်ရံ သာယာသောအိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အပင်ပန်းခံရသောကြောင့် အချို့သူတို့က ဆက်မကြိုးစားလိုတော့ချေ။ သို့သော် ပြဿနာများကြောင့် သင်တို့၏သစ္စာကတိပြုမှု သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်တွင် သင်တို့အတူတကွ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတို့ကို မစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနှင့်။
“အိမ်ထောင်ရေးကို အောင်မြင်စေလိုကြောင်း ဖော်ပြပြီး စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် ယေဟောဝါဆီက ကောင်းချီးခံစားရနိုင်တယ်” ဟုအိမ်ထောင်သက် ၃၃ နှစ်ကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ဆစ်ဒ်က အကြံပြု၏။ ခက်ခဲချိန်များတွင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သစ္စာရှိရှိ ထောက်မပေးကာ အဆင်ပြေချိန်များတွင် အတူဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းက သင်တို့အား သာယာသောအိမ်ထောင်ခရီးတစ်လျှောက် စိတ်ကျေနပ်စွာ ဆက်လက်ဖြတ်သန်းစေပါလိမ့်မည်။
^ အပိုဒ်၊6လွတ်လပ်စွာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုရန် လက်ရှိအိမ်ထောင်ကို ပြတ်စဲနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအကြောင်းရင်းမှာ အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည့် မတရားမေထုန်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယေရှုဖော်ပြခဲ့၏။—မဿဲ ၁၉:၉၊ ကဘ။
^ အပိုဒ်၊9ဤဆောင်းပါးတွင် အမည်တချို့ကို ပြောင်းထားပါသည်။
^ အပိုဒ်၊ 22 အပြစ်မဲ့သောအိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သူနှင့် ကွာရှင်းမည်၊ မကွာရှင်းမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ (မဿဲ ၁၉:၉) ဩဂုတ် ၈၊ ၁၉၉၅၊ နိုးလော့! [အင်္ဂလိပ်] မှ “သမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့်– အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း—ခွင့်လွှတ်ရန်လော၊ ခွင့်မလွှတ်ရန်လော” ဆောင်းပါးကိုရှု။
[စာမျက်နှာ ၆ ပါ အကျဉ်းဖော်ပြချက်]
အိမ်ထောင်ရေးဟူသောခရီးကို ဖြတ်သန်းရန် သမ္မာကျမ်းစာသည် မြေပုံတစ်ခုနှင့်တူ
[စာမျက်နှာ ၇ ပါ လေးထောင့်ကွက်/ရုပ်ပုံ]
▪ သင်တို့နှစ်ဦးစလုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိသည့် အချိန်တစ်ချိန်ကို စီစဉ်ပါ။
▪ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အပြုသဘောရှိပါ။
▪ စကားဖြတ်ပြောခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အပြန်အလှန်နားထောင်ပေး၍ စကားပြောပါ။
▪ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ ခံစားချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
▪ သဘောထားကွဲလွဲသည့်အချိန်တွင်ပင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စာနာမှုပြပါ။
▪ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိကာ အလိုက်အထိုက်ဖြစ်စေပါ။
▪ အမှားပြုမိသည့်အခါ နှိမ့်ချစွာ တောင်းပန်ပါ။
▪ တန်ဖိုးထားကြောင်း၊ ချစ်ခင်တွယ်တာကြောင်း ဖော်ပြပါ။
[စာမျက်နှာ ၈ ပါ လေးထောင့်ကွက်/ရုပ်ပုံ]
▪ အိမ်ထောင်ကို ခိုင်မြဲစေသော ကျမ်းစာမူများကို စိတ်တွင်စွဲမှတ်ထားပါ။
▪ သင့်အိမ်ထောင်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက်ကို အချိန်ပေးပါ။
▪ နွေးထွေးမှု၊ မေတ္တာနှင့် ချစ်ခင်တွယ်တာမှုတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။
▪ ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သူဖြစ်ကာ သစ္စာရှိပါ။
▪ ကြင်နာမှုနှင့် ရိုသေလေးစားမှုရှိပါ။
▪ အိမ်အလုပ်များကို ဝိုင်းလုပ်ပါ။
▪ နှစ်သက်ဖွယ်စကားများကို အပြန်အလှန်ပြောဆိုပါ။
▪ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာများ ဝေမျှပြောဆို၍ အပန်းဖြေပါ။
▪ အိမ်ထောင်ရေးကို ခိုင်မြဲစေရန် ဆက်လုပ်ဆောင်ပါ။
[စာမျက်နှာ ၉ ပါ လေးထောင့်ကွက်/ရုပ်ပုံ]
▪ ငါ့ရဲ့အိမ်ထောင်မှာ ဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အလိုအပ်ဆုံးလဲ။
▪ အဲဒါကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ဘယ် အဆင့်တွေကို တက်လှမ်းရမလဲ။
နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ကို ရှောင်သင့်သည့် အကြောင်းရင်း
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် အနာဂတ်လူမျိုးဆက်ကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ နိုင်ပါမည်လော
ဝတ်ပြုရေးမှာ ပျော်ရွှင်အောင် ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ထိုင်း အစားအစာကို မြည်းစမ်းခြင်း
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဇူလိုင် ၂၀၀၈
နိုးလော့! ဇူလိုင် ၂၀၀၈